01/10/2018 - Page 4 sur 4 -
«Mpamafy lainga »
Nilaza i Andry Rajoelina fa tsy afaka nifampiraharaha tamin’ireo firenena any ivelany nandritra ny tetezamitatra. Izay no antony tsy nahafahana nampandroso ny firenena tamin’ireny fotoana ireny, raha ny fanazavany. Tsy tokony hiteraka resa-be araka izany …Tohiny
Lalam-pirenena Faharoa (RN2) : Potika tanteraka, tsisy fanamboarana
Tsy misy fikarakarana mihitsy. Potika tanteraka ny lalam-pirenena Faharoa (RN2) mampitohy an’Antananarivo sy Toamasina, izay mirefy 379 km. Raha efa niroso sy nandray an-tanana ny fanamboarana sy fanatsarana iny RN2 iny, ny teo anivon’ny Fanjakana …Tohiny
Roa sisa dia tapitra ny 7 andro amin’ny hetsika « coup de poing » hifanotronan’ny kaomina Antananarivo Renivohitra sy ny Samva. Tao anatin’ny dimy andro nanaovana ny hetsika dia tsy hita izay vokany nentina, fa …Tohiny
Raha efa nolavin’ny fivorimben’ny komity maharitry ny Fifanarahana momba ny varotra iraisam-pirenena, ny harena voajanahary tandidonin-doza, na SITES, andiany faha-69 tany Soisy, ny tolo-kevitra momba ny fizotran’ny fanisana ny tahirin-kazo sarobidy malagasy, sy ny drafitra …Tohiny